musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeMuteereri weAmerica anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita “Angie”. Our Angelina Jolie Childhood Story uye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhoroondo yeupenyu hwake musati mazita uye mumhuri. Kunyanya zvakadaro, vazhinji vanosiya uye ON-Screen inozivikanwa zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezve makumi emakore-refu firimu basa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Angelina Jolie's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Angelina Jolie Voight akazvarwa musi we 4th waJune 1975 kuLos Angeles, muCalifornia, United States.
Akanga ari mwana wechipiri akaberekwa naamai vake Marcheline Bertrand (mutambiri) uye kuna baba vake Jon Voight (mutambi).
Nguva pfupi mushure mekuberekwa kwake, Jolie akanga asina kuroorwa achirerwa naamai vavo avo vakaparadzana nemurume wavo nekuda kwemamwe mararamiro avo.
“Angie asati azvarwa amai vake vakagutsikana kuti murume wake Jon aive achidanana nemudzidzi wechidiki wemadhirama anonzi stacey. Izvo zvakatyora moyo wake uye zvakaita kuti mamiriro emumba anyanye kusati kwaitika vaviri vacho vasati vaenda vakasiyana ".
Akayeuka aimbova nanny Jolie, Krisann Morel wekuparadzaniswa.
Bertrand akazoenda nevana vake kuenda kuPalisades, guta riri muNew York apo Angelina wechiduku akakura uye akapedza chikamu chemakore ake ekugadzira nemukoma wake mukuru, James Haven.
New York panguva iyoyo rakanga riri guta rairwisana neshanduko pakati pekudonha kwehupfumi uye mhosva dzakapararira. Zvisinei, iyo Twin Towers yakanongedzera kune ramangwana rakajeka kune vagari veguta iro mhuri diki yaJolie yakanga isiri iyo yakasarudzika.
Ndichiri kugara muNew York Jolie ainyanya kukweverwa kumafirimu uye aive nechinangwa chekuita. Muchokwadi, iyo yekupedzisira yakanga ichiri kuzoonekwa yeYoung Jolie uyo akaita yake skrini yekutanga semwana padivi pababa vake, Jon Voight (asati aenda kuNew York) muLookin 'kuti Abude (1982).
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo uye Vechiduku Vanonetseka
Mhuri yaJolie yakadzokera kuLos Angeles paakanga ave nezera 11. Kutanga kumira pakufambira mberi kwake pakudzidza kwaive kunyoreswa kwake kuLee Strasberg Theatre Institute kwaakadzidza kwemakore maviri uye akaita kuoneka mune akati wandei zvigadzirwa.
Akazoenda kuBeverly Hills High School uko aizivikanwa kuti akaratidza kushungurudzika kwepfungwa nekuda kwehondo yake yakareba nekuzvivimba. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, musikana iyeye aiva nemucheche uye asingakanganwiki akafuka nguo dzechipiri uye akadzingwa nevezera rake.
Kuendesa ku Moreno Moreno School haina kuita zvishoma kuti abvise Jolie matambudziko ake epfungwa / chirwere chepfungwa sezvaakazozivikanwa nemabasa anosanganisira kuzvicheka nemapanga, kupfekedza mumatema ose uye kuenzana nehutano hwekunamata nekutora zvidzidzo pakumisa pasi kuti ave mufaro mutevedzeri.
Mukuwedzera, akagara nemukomana wemakore 2 uye akawedzera matambudziko ake nemishonga. Makumi emakore gare gare, Jolie aizobvuma kuedza kushandisa zvinodhaka kusvika ku20, achiwedzera kuti zvaiva chishamiso kuti akapona makore iwayo:
"Kungova musikana muduku aive achiedza, asingatyi uye zvishoma ... Ndakanga ndisingakwanisi kuparadza. Ndinofunga kuti vakawanda vechidiki mubhizinesi rino vanorasikirwa nzira yavo. Iwe hauzive kuti chii chinokosha. Iwe hauzive kwauri. Uye iwe unoziva chimwe chinhu chakakanganisika, nokuti hachisi hupenyu sezvazviri chaizvo. Zvakafanana nekurarama mune imwe chokwadi chakaipisisa. "
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Mugore 1991 yakaunza mashoko akanaka kuna Jolie uyo akapedza chikoro chesekondari ndokubhadhara imba yake. Panguva ino, Akanga atoita pfungwa dzake kuti arege kutongogadziriswa kutevedzera shure kwekukundikana kwake kuenzanisa.
Hazvina kutora nguva refu asati atanga hunyanzvi hwemufirimu basa mu1993 paakatamba chinzvimbo mufirimu reSci-fi 'Cyborg 2'. Yakazotevera nyanzvi screen chinoedza akaona Jolie achitora akati wandei mumafirimu ayo ayo ekutanga Hollywood pikicha, maHackers (1995) anomira.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Jolie akanyora kubudirira kwekutanga mu1997 paakakunda mubairo wake wekutanga weGolden Globe Award nekuita kwake mu 'George Wallace' (1997). Akatsunga kusazorora pazvikwashu zvake, akawedzera simba pane rake rakapfuura rerima kuti atore chikamu chinoshungurudza muHBO's Gia (1998) iyo yakamutorera mubairo weGolden Globe we Best Actress.
Zvisinei, kuparadza kwake kukuru kwakauya gore rakatevera mu1999 paakakunda chikamu cheChikoro che Best Best Actress muMusikana, Akavhiringidzika (1999), kugadziriswa kwakamuwanawo wechitatu yeGold Globe Award uye wechipiri Screen Actors Guild Award. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Jolie ndomumwe wevashoma vashoma vekuAmerica vakaroorwa katatu. Tinounza tsanangudzo pamusoro pemhuri yake.
Kuroorana naJohnny Lee Miller: Chekutanga pakati pehukama hwaJolie hutatu hwehukama hwaive hwekuroora kwake naJonny Lee Miller, muBriton uye waaishanda naye pachiratidziro waakasangana naye pavhivhi yevaHackers (1995).
Dhiyabhorosi haana kupedza nguva yekuroora mwedzi gare gare. Zvisinei, imba yavo yakarova matombo gore rakapera apo ivo vakaparadzana uye pakupedzisira vakasaina mapepa okurambana mu1999. Vakaramba vakashamwaridzana neshamwari uye makore akazotevera vanotsanangura chisarudzo chavo chisina kunaka chokuti vasunge pfumo se "Kukanganisa kwehudiki"
Kuroorana naBilly Bob Thornton: Achifambira mberi, Jolie akaroorwa naBilly Bob Thornton, mumwe mutambi waakasangana pamutambo wefirimu weFoxfire 1996. Vaviri vacho vainzi vaine nyaya kunyange apo Jolie paaiva akaroorwa naMiller.
Vakaroorana muna 2000 chete kurambana pashure pemakore 3, mbiri yekuvandudza pane yaimboimboora.
“Zvakanditorawo nekushamisika, zvakare, nekuti takangochinja zvachose. Ndinofunga rimwe zuva takanga tisina chinhu chakafanana. Uye zvinotyisa asi… ndinofunga zvinogona kuitika kana ukabatanidzwa uye usati wazviziva iwe. ”
Jolie akabvuma nezvekuparara kwavo kamwe kamwe.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts: Kuroorana NeBradd Pitt
Jolie uyo anoratidzika kuva nechirwere chekuwira murudo nevatori vemabhizimisi akabata basa rake zvakare pane zvemufirimu akaiswa Brad Pitt panguva yekuitwa kwaVaMnu naVaSmith mu2004. Pitt aiva panguva yaakaroorwa nemumwe mufananidzo wefirimu Jennifer Aniston (akafananidzirwa naye pasi apa), kubatana kwakabviswa pakupedzisira mu 2005 nekuda kwezvaakaita naJolie.
Brad Pitt naAngelina Jollie, vakataura nezvazvo "Brangelina" vakava vaviri vanozivikanwa muHollywood uye vainyanya kutaurwa mumatloids.
Hukama hwavo hwakamutsa kuberekwa uye kugamuchirwa kwevana vazhinji. Kutanga yaive sarudzo yaPitt yekuzadza mapepa evana vaviri; Maddox (mukomana) naZahara (musikana) akagamuchirwa naJolie anobva kuCambodia (2002) uye Ethopia (2005) zvichiteerana.
Vaviri ava vakabva vaita mwanasikana wavo wekutanga Shiloh Nouvelle muna 2006. Mifananidzo yekutanga yemwana ane mukurumbira uyo akaberekerwa muNamibia yakatengeswa ku "Vanhu!" uye “Mhoro!” kune rekodhi huwandu hwemamirioni gumi emadhora!.
Kuwedzera kune runyorwa rwevana vavo vakagamuchirwa raiva Pakistan Boy Pax Thien uyo akabatana nemhuri kubva kunherera muna March 2007.
Gore rakatevera, vakaroorana vakabereka mapatya - Knox Leon uye Vivienne Marcheline mune kliniki kuNiza paChNUMXth yaJuly 12. Maererano nevanopemberera vana vanoita, magazini eMamerica aibhadhara mari inokwana ye2008 mamiriyoni ose kuitira kuti vadzivirire kodzero dzakakwana dzokubudisa mafirimu ekutanga emajaya avo.
Vakaroorana vakazobatanidzwa muC2012 mushure mezvo vakaroora paC23rd yaAugust 2014 muFrance.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: The Divorce
Musi waGunyana 19, 2016, Jolie akamhan'arira kurambana kubva kuna Pitt, achidudza kusawirirana kusingawirirane. Vakaroorana akaisa chikonzero chekurambana kutevera chimwe chiitiko mundiza apo Brad akazviti haana kurasikirwa naye uye akapesana nemwanakomana Maddox uyo aiva makore 16 panguva iyoyo.
Joile akataura nezve kurambana kekutanga muna Kukadzi 2017 nekucherechedza kuti:
"Handidi kutaura zvakanyanya pamusoro pazvo, kunze kwekutaura kuti yakanga iri nguva yakaoma uye isu tiri mhuri, uye isu ticharamba tiri mhuri. Tichapfuura munguva ino uye tine tariro yekuva mhuri yakasimba nokuda kwayo. "
MunaAugust 2017 zvakataurwa kuti kurambana kwave kuri “Batisisa” uye kuti vanga vachitoronga kudzokerana. Asi muna Kubvumbi 2018, Zuva zvakaziviswa chete kuti kurambana kwakapedzwa uye Brad akabvumidzwa kuwana vana.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
Jolie akaberekerwa mumhuri yevana. Tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pemhuri yake.
Nezvaamai vake: Amai vaJolie, Marcheline Bertrand aimbove mutambi uyo akasiya basa rake rekuita kuti atarise kurera vana vake. Bertrand aive nehukama hwepedyo naye iye akamboita eccentric mwanasikana waakakurudzira kutora modelling makirasi mushure mekuita kamwechete akatadza kudzorera chivimbo chake.
Akasuruvara akafa nechirwere chekuvhara mazamu musi wa 27th waJanuary 2007. Kusvikira iye afa, Bertrand akanga ari mukadzi anoda rugare, uyo akamira nevana vake uye akatsigira mabasa avo.
Pamusoro paBaba vake: Baba vaJolie, Jon Voight mutambi wechigamba uyo akapihwa mibairo yezvidzidzo zvechinzvimbo chake muvhi 'Kuuya kumba'. Jon ave achibatsira rudo rwaJolie rwekuita kusanganisira kumubatsira kutanga kwake kwescreen semwana muLookin 'Kubuda (1982). Zvisinei, ivo vaviri vakanyora makore mazhinji ekurwara nekuda kwekutambudzika kwaJolie achiri kuyaruka. Zvakanyanya aive matambudziko aJolie epfungwa zvekuti akagura Voight kubva kuzita rake rekupedzisira zvisinei baba vake vakaridzorera.
Ukama hwavo hwakangovandudzwa mushure mekunge Jolie apora pakurwara kwake uye ivo vakagara mune zvakanaka kubva ipapo.
Nezvehama yake: Mukoma waJolie, James Haven mutambi weAmerica uye mugadziri. James anogovera chisungo chakasimba naJolie uyo paakakunda iye Oscar, akatsvoda munun'una wake pamiromo ndokuti, "Ndiri kudanana nemukoma wangu izvozvi." Chiito chacho chakaita runyerekupe rwekubatana, asi Jolie akadzinga zvinyorwa nekutsanangura kuti iye naJames vakatsigirana mumwe kune mumwe nekuda kwekusimbiswa kwepfungwa, nekuda kwekuti ivo vakave varombo vemisha yakaputsika.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Tattoos
Angelina Jolie, kufanana Conor Macgregor, ine mhando dzakawanda dzehutano hwemuviri. Tinokuunzira mufananidzo wakajeka unotsanangura zvishomanana zvemavara ake mazhinji nemafungiro ari shure kwavo.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Zvimwe Zvako
Angelina Jolie ane unhu hunotevera kumunhu hwake;
Inoshandiswa: Izvi zvinoratidzwa nenzira iyo yaakatora matanho ekudzivirira chiitiko chekutambura kubva mucheche wekamu uye ovarian. Mutori wenhau uyo ​​vabereki vake nevabereki vake vane nhoroondo pamwe neoncology yakawana mastectomy (kusunungura) pamwe chete uye yakagadzirisa chirwere chake pachipfuva che2013. Makore maviri gare gare, akaita kuti mazai ake abviswa mu 2015.
Charitable: Jolie aive neruzivo rwekutanga rwehurombo nekutambura munyika dzechitatu dzepanyika achitora firimu "Lara Kroft: Tomb Raider" muCambodia. Chido chake chekubatsira kudzikisira kutambura chakamuona achiva Mumiriri weGoodwill weUN uye aive Muna 2004, akapihwa nekukudzwa mugari weCambodian nemutungamiriri wenyika.
Jolie zvakare akatanga masangano anobatsira anosanganisira Maddox Jolie-Pitt Foundation, Maddox Chivan Children's Center yevana vane hutachiwana hweHIV muPhnom Penh, pamwe neDzidzo Kudyidzana kweVana veMakakatanwa uye yevana vanobatwa nenjodzi dzinongoitika dzega neetekinoroji.
Kushaya simba: Pamusoro peflip, Jolie anowanzotadza kusagadzikana, anowanzoita kuora uye anovimba nenyaya.
Angelina Jolie Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Other Facts
Angelina Jolie ndiye mutyairi wechibharo ane chikwata chimwechete-injini Cirrus SR22 ndege. Anogonawo kuva mumwe wevamwe vanofara uye vanoita masayendisiti kuona nyika kubva munzvimbo nekubhururuka paRichard Branson's Virgin Galactic.
80% YeMitambo yaLara Croft yakaitwa naAngelina, Kwete Kumira-Mu.
Ndiye izwi riri kuseri kwaTigress mumuvhi Kung Fu Panda 2 & 3.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Angelina Jolie Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!